Downloads 24 908
Munyori: Muenzaniso waTom Ruth Ruth, Zvinyorwa na Chris Evans & Louis Quintero & Rikoooo
Updated musi 03 / 06 / 2018: Iye zvino anobatana nePrepar3D v4 +, maviri liveries: German Tanker uye RAAF, majeji matsva, mavara maDH HD emakiritori akafanana, mutsva mutsva, itsva 2d panel, yakawedzera FMC, yakawedzera Autoland CAT II ne3, yakawedzera Airbus GPWS.
Ngarava yepamusoro-soro yepamusoro yemhando ipi zvayo yeFSX uye Prepar3D. Anouya nekambori yakadzika uye tsika yemitambo. Ivai nemafambiro uye makashanda ekufambisa refu, verenga bhuku racho kuti mudzidze kuishandisa.
Pasi pemufananidzo we refueling ramps panja (denderedzwa yakatsvuka) inowanika chete kubva kubhendi yakabhendi iri pamusoro.
Origins uye tsanangudzo ndege chaiyo:
The A330 Multi Basa Vafambisi Transport (MRTT) iri uto rinobva pakati Airbus A330-200 airliner. Rakagadzirirwa somunhu kwokuvandudza-basa mhepo-kuti-mhepo refueling uye zvifambiso ndege. Nokuti mhepo-kuti-mhepo refueling mishoni ari A330 MRTT inogona vakapakata mubatanidzwa upi anotevera nehurongwa:
* Airbus Military Aerial Refuelling Boom System (ARBS) kuti mudziyo-akashongedzerwa mugamuchiri ndege.
* Cobham 905E pasi-bapiro refueling pods kuti vachiongorora-akashongedzerwa mugamuchiri ndege.
* Cobham 805E Fuselage Refuelling Unit (FRU) kuti vachiongorora-akashongedzerwa mugamuchiri ndege
* Universal Aerial Refuelling Sekaiichi System Installation (UARRSI) kuti kuzvidzora refueling.
The A330 MRTT ane kunonyanyisa mafuta inokwana 111,000 makirogiramu (245,000 LB). Standard mafuta kukwanisa rinobvumira chigaro chinotakurwa kweimwe 45,000 makirogiramu ane nhumbi. bapiro The A330 MRTT rine zvakajairika chivako pamwe mana-injini A340-200 / -300 pamwe yanyatsosimba vanomhanyisa nzvimbo nokuda A340 kuti outboard injini. Naizvozvo wing A330 MRTT wacho zvinoda shoma nadzurudzo nokuda kushandiswa hardpoints izvi nokuda bapiro refueling pods.
The A330 MRTT kabhini rakagadzirirwa nechokwadi optimum zvigaro configurations mukirasi ose, kuti maximize zvose kugona nenyaradzo. The kabhini inogona configured guru siyana Layouts kubva 253 zvigaro vari vatatu mukirasi configuration, kuburikidza 298 vaitakurwa ari-kirasi mbiri configuration, kuti 380 nendege rimwe boka configuration. The kabhini ari yakarongedzwa ane attractively ano magadzirirwo. Izvi zvinhu dzinoita zvakawanda rakakwana configurations kubva maximized boka chokufambisa kuti zvakaoma customization yakakodzera VIP uye muenzi kumishoni. An Opsioneel Crew Zororo mupanda (CRC), iri mberi kabhini inogona kuiswa kuti handingadariki vashandi kuitira kuti vawedzere nguva iripo kuushumiri. Mufambi kabhini the A330 MRTT inogona zvirangaridzo kutaridza bvisika airstairs kuti vakwanise vashandi vemo uye vatakurwi kupinda uye kusiya ndege apo airbridges kana pasi rutsigiro zvokushandisa havana kuwanikwa.
The A330 MRTT zvinogona configured rokuita Medical kubvisa (Medevac) kumishoni. The guru Kukura fuselage anobvumira kunonyanyisa sanduko uye kunovimbisa nyaradzo varwere vose, semuenzaniso kuti 130 mureza stretchers zvinogona kuitwa.
Kufanana A330-200, iye A330 MRTT inosanganisira vaviri nechepazasi uriri nhumbi nezvikamu (mberi uye aft) uye hombe nzvimbo kugona mamwe chinoratidza pakawanda ari ndege. Nhumbi vabatisise chakagadziridzwa kukwanisa kutakura kuti 8 pallets zvechiuto tisingaverengi sevhiriyeni ULD.
The pakawanda of A330 MRTT kunoita vakawanda nhumbi kusarudza kutakurwa ari Opsioneel huru uriri nhumbi mupanda. Kubva mureza yezvokutengeserana midziyo uye pallets kuburikidza zvechiuto, ISO uye NATO pallets (kusanganisira zvigaro) uye midziyo, kuti uto midziyo nezvimwe zvinhu guru izvo vakaremerwa nepasuo inotakura.
Standard vezvokutengeserana A330-200s Vanosunungurwa kubva Airbus Final Assembly Line kuToulouse (France) kuna Airbus Military Conversion Centre muna Getafe (Spain) kuti zvakakodzera pamusoro refueling gadziriro uye avionics zvechiuto. Hurukuro yokutanga kanda mutengi, Australia ari chakarongwa nokuda pemwedzi 2010. Qantas Defence Services ari kuchinja yasara ina A330-200s panguva yayo Brisbane Airport Zvivako achimiririra EADS nokuda RAAF.
Downloads: 28 625
Downloads: 23 293
Downloads: 40 004